လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်းတွေမှာ တော်တော်လေးစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမယ့် တစ်ချို့အစိတ်အပိုင်းတွေကတော့ ၎င်းတို့မရှိလည်း အဆင်ပြေနိုင်မယ့်အစိတ်အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။ ဗီတာမင်ဖြည့်စွက်စာလိုမျိုး လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသရွေ့ပေါ့။ ၎င်းတို့မရှိဘဲ သင့်ဘဝအပေါ် အများကြီးသက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘဲ ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကို ဦးဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ မရှိလည်းဖြစ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေက ဘယ်အရာတွေဖြစ်မလဲ?
လူတွေမှာ နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ရှိပြီး ဘယ်ဘက်နှစ်ခေါင်းနှင့် ညာဘက်နှာခေါင်းကြားထဲမှာ ပိုင်းခြားထားတဲ့ အရာလေးရှိပါတယ်။ နှာခေါင်းစက်ဝန်းလို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းရပြီး ၎င်းက သင့်နှာခေါင်းပေါက်တွေထဲက တစ်ခုကို ပိုအလုပ်လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ နာရီအနည်းငယ်တိုင်းမှာ လူတွေရဲ့ အတွင်းပိုင်းတစ်သျှူးတွေရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် နှာခေါင်းပေါက်တစ်ခုကနေ တစ်ခြားတစ်ခုကို အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပြောင်းသွားပါတယ်။ နှာခေါင်းပေါက်တစ်ခုက အနံ့ခံနိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်တာကြောင့် တစ်ခြားတစ်ဖက်က လေဝင်လေထွက်နည်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကျွန်မတို့သိကြတဲ့အတိုင်း အဆုတ်က ခန္ဓာကိုယ်ဆီကို အောက်စီဂျင်တွေပို့ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အံ့ဩစရာကောင်းတာက အားနည်းတယ်ဆိုပေမယ့် အဆုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ သာ ရှင်သန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ အားကစားသမားတွေဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အဝလေ့ကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတော့ လုပ်နိုင်ဆဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ကျန်နေသေးတဲ့အဆုတ်က ပိုကြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့အရာကို အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ဖို့က အချိန်နှင့် လေ့ကျင့်မှုပဲ လိုအပ်ပါတယ်။
လူအများစုက အစာမစားဘဲ အသက်ရှင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား? အူသိမ်က အသက်ရှင်သန်ဖို့ အရေးကြီးပြီး အစာခြေဖို့ အရေးကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်ဖြစ်စေမယ့် အစာအိမ်ကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အစာချေဖျက်မှုကို ကျော်ပြီး အူတွေကို တိုက်ရိုက်ပို့နိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေက အစာပြွန်ကို အူသိမ်နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ရလဒ်အနေနဲ့ လူတွေက ဗီတာမင်ဖြည့်စွက်စာတွေ ဖြည့်စွက်ခြင်းနဲ့ ပုံမှန်စားသောက်နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အစာအိမ်ကင်ဆာလိုမျိုး ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါရှိမှသာ အစာအိမ်ကို ဖယ်ရှားလေ့ရှိပါတယ်။
ကလေးတစ်ချို့ကိုတော့ အာသီးတွေကို ဖယ်ရှားခြင်းက ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာလည်း ၎င်းတို့ကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး သူတို့မပါဘဲလည်း ရှင်သန်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အာသီးတွေဟာ သင့်လည်ချောင်းရဲ့ နောက်ဘက်မှာ တည်ရှိပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ အလုပ်က ခံတွင်းထဲသို့ ပိုးမွှားတွေမဝင်ရောက်ဖို့ တားဆီးပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုအတွက် အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ၎င်းတို့က သေးငယ်လာပေမယ့် တစ်ချို့ကလည်း ခွဲစိတ်ဖို့ လိုအပ်လာတဲ့အခါ ခွဲစိတ်လိုက်ကြပါတယ်။
၅။ နားရဲ့ တစ်ချို့အစိတ်အပိုင်းများ
ကျွန်မတို့ အကြားရဖို့ နားတွေကို လိုအပ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ်ဘိုးဘေးဘီဘင်တွေဆီမှာ တိရစ္ဆာန်တွေကဲ့သို့ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကြားအာရုံနှင့် စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြနိုင်ဖို့ auricular လို့ခေါ်တဲ့ ကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ကြွက်သားအုပ်စုက ဒီကနေ့အထိရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွေက ၎င်းတို့က အားနည်းသွားပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုလိုမျိုး စိတ်ခံစားချက်တွေရှိလာတဲ့အခါ လူတွေရဲ့ နားရွက်တွေဟာ ရွေ့လျားနေသေးတာကတော့ ရှင်းပြမရနိုင်သော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။